यौन चाहना पुरा भएन ?कन्ट्रोल गर्ने तरीका……………………………….. – MeroJilla.com
यौन चाहना पुरा भएन ?कन्ट्रोल गर्ने तरीका………………………………..
तपाईको जस्तै उमेरमा धेरै साथीहरुलाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्छ । कतिले ब्यक्त गरे होला कतिले गरेनन् होला, अथवा अरु साथीहरुले यौनचाहना भएपछि हस्तमैथुन गरेहोला, वा अरु कुनै तवरले यौन ब्यबस्थापन गरे होला । २० बर्षको उमेरमा स्वभाबिक रुपमा यौन चाहना हुन्छ, यौनसम्पर्क गर्दा कस्तोहोला, यौनसम्पर्क गर्न पाएपनि हुने भन्ने जस्तो चाहना हुनु स्वभाबिक पनि हो ।
सबै जिज्ञासा र सबै कौतुहलताहरु मेटाउन सकिन्छ वा सम्भव छ ? छैन नी हैन, चन्द्रमामा मान्छे पुगे भनेर हामी पुग्न चाहेर हुदैँननी त । सबै कुराको समय र बेला आउँछ , यौनचाहना भयो भनेर नआत्तिानुस यो स्वभाबिक प्रक्रिया हो ।
योनिलाई नै महिलाको प्रमुख यौनअङ्ग मानिन्छ । महिलाहरूमा योनिबाहेक अन्य विभिन्न अङ्ग पनि यौनका दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन् । जस्तै कि भगक्षेत्र, ठूलो तथा सानो भगोष्ठ, भगांकुर, स्तन । त्यसबाहेक मुख तथा अधर, नितम्ब, गुदद्वार, मलाशय, चर्म (छाला) लाई यौन अङ्गका रूपमा नलिइए पनि हामीले प्राप्त गर्ने धेरैजसो यौनसुख यिनै अङ्गबाट प्राप्त गरिरहेका हुन्छौं ।
जाँध, तिघ्राको भित्री भाग, घाँटी, काखी आदि पनि यौन संवेदनशील हुन सक्छन् । स्पर्शको अनुभूति विभिन्न किसिमको हुन सक्ला, जस्तै कि मर्दन, हल्का स्पर्श, सुमसुम्याई आदि ।रुषको तुलनामा महिलाहरूको हस्तमैथुन गर्ने तरिकामा बढी विविधता हुन्छ । महिलाहरूले विभिन्न यौनअङ्गलाई प्रयोगमा ल्याई हस्तमैथुन गरेको पाइन्छ । हस्तमैथुनमा यौन परिकल्पना एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
हस्तमैथुन गर्दा आफूले चाहेअनुरुप यौन क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, स्थान अनि आशनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यसमा मानसिक पक्ष सबल रूपमा जोडिएतपाईको जस्तै उमेरमा धेरै साथीहरुलाई यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्छ । कतिले ब्यक्त गरे होला कतिले गरेनन् होला, अथवा अरु साथीहरुले यौनचाहना भएपछि हस्तमैथुन गरेहोला, वा अरु कुनै तवरले यौन ब्यबस्थापन गरे होला ।
२० बर्षको उमेरमा स्वभाबिक रुपमा यौन चाहना हुन्छ, यौनसम्पर्क गर्दा कस्तोहोला, यौनसम्पर्क गर्न पाएपनि हुने भन्ने जस्तो चाहना हुनु स्वभाबिक पनि हो । सबै जिज्ञासा र सबै कौतुहलताहरु मेटाउन सकिन्छ वा सम्भव छ ? छैन नी हैन, चन्द्रमामा मान्छे पुगे भनेर हामी पुग्न चाहेर हुदैँननी त । सबै कुराको समय र बेला आउँछ , यौनचाहना भयो भनेर नआत्तिानुस यो स्वभाबिक प्रक्रिया हो ।